Maseva ane machipisi akavakirwa paISA RISC-V anogona kusvika munguva pfupi ... | Linux Vakapindwa muropa
Mutungamiri mukuru weSiFive anodaro Makore mashanu anosvika maseva ekutanga anoenderana neISA yakavhurika-sosi RISC-V. Iyi nyowani yakavhurika dzidziso yekumisikidza dhizaini kwave kuwana traction uye mukurumbira munguva pfupi yapfuura. Kunyangwe kubva kuEurope vakazviona se isu takatotaura kare nezveLxA. Uye hazvishamise kuti ivo vachakurumidza kusvika nharembozha kutsiva ARM uye nemaseva uye HPC zvakajairika.
Iyo RISC-mhando ISA yakanyatsogadziriswa kune ayo matsva mazwi uye zvine modular saka unogona kuwedzera kana kubvisa mirayiridzo mamodule sezviri kudikanwa. Nenzira iyi unogona kukwirisa machipisi uye kudzivirira chimwe chinhu chakafanana nex86 kubva mukuitika nekuenderana kumashure. Kuti ivo havasi ivo chete maCISC mirairo, asi ivo vatove vanokwana kupfuura gumi nemazana miraira, mazhinji acho asisashandiswe kana asinganzwisise software yanhasi ...
Naveed Sherwani, CEO weSiFive, anga achitarisira kufanotaura chirevo ichocho. Kunyangwe pamwe vaigona kusvika kunyange pakutanga. Muchokwadi, akataura kare kare kuti aive makore mashanu mahwendefa ekutanga uye mafoni ane RISC-V asati asvika uye angangoita makore gumi ekuona maseva ekutanga neiyi ISA. Asi ikozvino nhamba yekutanga yadonha kusvika kumakore maviri emafoni nhare, uye mashanu eiyo HPC.
Nhau dzakanaka. A ISA yakavhurika-sosi" basa rinofanira kuitwa uye zvinhu zvakawanda zvekuvandudza nekuvandudza. Izvo zvine chokwadi ndechekuti kusagadzikana kwakaonekwa mumachipisi eIntel, ARM nevamwe, zvakabatsira zvakawanda kupa zvakatonyanya kuRISC-V.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Seva dzine machipisi zvinoenderana neISA RISC-V inogona kusvika munguva pfupi ...